L0phtCrack, iyo password yekuongorora uye yekudzoreredza chishandiso ikozvino yakavhurika sosi | Linux Addicts
L0phtCrack, iyo password yekuongorora uye yekudzoreredza chishandiso ikozvino yakavhurika sosi
Munguva pfupi yapfuura nhau dzakaburitswa iyo Toolkit source code yakabudiswa L0phtCrack, chiri chishandiso chakagadzirirwa kudzoreredza mapassword kubva kuma hashes, kusanganisira kushandisa iyo GPU kukurumidza kufungidzira password.
Uye ndizvo zvakabva kubhuku rataurwa iyo kodhi yaive kubva kuL0phtCrack ikozvino yave yakavhurika sosi pasi peMIT uye Apache 2.0 marezinesi. Pamusoro pezvo, ma plugins ekushandisa John the Ripper uye hashcat se password yekupwanya injini akaburitswa muL0phtCrack.
Neizvi, makumi emakore-ekare password yekuongorora uye yekudzoreredza chishandiso L0phtCrack yave kuwanikwa kune wese munhu kushandisa seyakavhurika sosi.
Kune avo vasingazive nezveL0phtCrack, iwe unofanirwa kuziva izvozvo chishandiso ichi chakazvarwa muna 1997 nechikwata chematsotsi chinonzi L0pht Heavy Industries.. Kunyanya, kusikwa kwechishandiso kunonzi kuna Peiter C. Zatko (aka Mudge) uyo akazoshanda kuDefence Advanced Research Projects Agency (DARPA), Google, uye munguva pfupi yapfuura Twitter.
L0phtCrack inoshanda sechishandiso chakatsaurirwa chekuongorora kuchengetedzwa kwepassword uye kudzoreredza mapassword akarasika uchishandisa brute simba, kurwisa kweduramazwi, kurwisa kwemuraraungu uye mamwe matekiniki.
Chigadzirwa Yakanga iri mukuvandudzwa kubva 1997 uye muna 2004 yakatengeswa kuSymantec, asi muna 2006 yakatengwa nevatatu vakavamba. yeprojekiti, sezvo vagadziri vakaramba vachichengeta chishandiso nekufamba kwenguva, kunyangwe paine shanduko dzakawanda mumuridzi mushure mekutora.
Muna 2020, chirongwa chakatorwa naTerahash, asi muna July wegore rino, kodzero dzekodhi dzakadzorerwa kune vanyori vepakutanga nekuda kwekutyorwa kwechibvumirano.
Ndokusaka yekutanga L0pht Heavy Industries yakazotorazve chishandiso muna Chikunguru 2021. Uye zvino, Christien Rioux (aka 'DilDog' pa Twitter) akazivisa kuburitswa kwechishandiso ichi seyakavhurika sosi. Rioux akataura zvakare kudiwa kwevanochengetedza uye vanoshingaira vanobatsira muchirongwa ichi.
Semagumo, vagadziri veL0phtCrack vakasarudza kusiya kupihwa kwezvishandiso muchimiro chechigadzirwa chemuridzi uye kuvhura iyo kodhi kodhi.
Kubva munaChikunguru 1, 2021, iyo L0phtCrack software haisisiri yeTerahash, LLC. Yakatorerwazve nevaridzi vekare, vaimbozivikanwa seL0pht Holdings, LLC naTerahash uyo akatadza kubhadhara chikwereti chekutengesa.
L0phtCrack haisisiri kutengeswa. Varidzi varipo havana hurongwa hwekutengesa marezinesi kana kutsigira kunyoreswa kweL0phtCrack software. Zvese zvakatengeswa zvakamira kubva musi waChikunguru 1, 2021. Kudzoserwa mari kuri kugadziriswa kune chero kunyoresa patsva mushure meChikumi 30, 2021.
Kutanga nekuburitswa kweL0phtCrack 7.2.0, chigadzirwa chinogadzirwa seyakavhurika sosi purojekiti ine ruzivo kubva munharaunda.
Kana dziri shanduko dzakabuda muvhezheni iyi kutsiva kwezvinongedzo nekutengesa cryptographic maraibhurari ekushandisa OpenSSL neLibSSH2, pamwe nekuvandudzwa kwekupinzwa kunze kweSSH kutsigira IPV6.
Pamusoro pezvirongwa zvekuwedzera kusimudzira kweL0phtCrack, kutakurika kwekodhi kuLinux uye macOS kunotaurwa (pakutanga chete Windows chikuva chaitsigirwa). Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kutama hakuzove kwakaoma, sezvo iyo interface yakanyorwa uchishandisa cross-platform Qt library.
Varidzi varipo vari kuongorora yakavhurika sosi uye dzimwe sarudzo dzeL0phtCrack software. Vhura sosi inotora nguva sezvo paine maraibhurari ane rezinesi ekutengesa akavakirwa muchigadzirwa chinoda kubviswa uye / kana kutsiviwa. Marezenisi ekuita marezinesi aripo akagoneswa zvakare uye anofanira kushanda sezvaitarisirwa kusvika shanduro yakavhurwa yavepo.
Finalmente kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezvazvo kana kuti vanoda kuongorora iyo kodhi kodhi yechishandiso, vanogona kuwana rumwe ruzivo uye zvinongedzo zvekufarira mune iyi link.
Kana kuti nenzira yakapusa iwe unogona kubatanidza repository ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » L0phtCrack, iyo password yekuongorora uye yekudzoreredza chishandiso ikozvino yakavhurika sosi
Manjaro 21.1.6 (2021-10-16) inogadzirisa yapfuura vhezheni yekumisikidza matambudziko uye pampers KDE vashandisi zvakare